Maxay Tahay Sababta Dawladda u magacaabi weydey guddigii farsamo ee lagu heshiiyey ? | Salaan Media
Maxay Tahay Sababta Dawladda u magacaabi weydey guddigii farsamo ee lagu heshiiyey ?
July 28, 2020 | Published by: Hamse
Waxaa si weyn isu soo taraya wel-welka iyo walaaca laga qabo xaaladda dalku ku socdo, waxaa soo badanaya baaqyada beesha caalamka ee taageerayey geeddi socdoka dowladnimada Soomaaliya ay soo saarayaan iyaga oo wadnaha farta uga hayo haddii aan la fulin heshiiskii Dhuusamareeb sida xaalku noqonaayo.
Shirkii Dhuusamareeb oo la soo xirey 22 Luuliyo qodobka ugu muhimsanaa waxa uu ahaa in la dhiso guddi farsamo oo ka soo shaqeeya noocyada doorasho ee ku habboon xiligan iyo in la isugu yimaado shir 15 Agoosto isla Dhuusamareeb kaas oo lagu soo bandhigaayo wixii guddigu ka soo shaqeeyey laguna ansixinaayo, sidoo kale qodobada ugu muhimsanaa ayaa ahaa in doorashadu xiligeedi ku dhacdo.
Ilaa saddex Dowald goboleed ayaa diyaariyey xubnaha guddiga farsamo uga mid noqon lahaa waxaana ay kala yihiin Hirshabelle, Jubland iyo Puntland oo mid laba xubnood diyaariyey.
Wakhtiga ka harsan shirka loo ballansan yahay waa 17 maalmood, Dowaldda Federaalka oo la doonaayey in ay hormuud ka noqoto arrintan weli ma magacaabin guddigii farsamada, waxaana ay dhex dabaalaneysaa mowjado siyaasadeed oo kale sida baadigoobka raysalwasaare cusub iyo muddo kororsi sidii lagu heli lahaa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal ka soo daba saarey hadalkii Raysalwasaare 9 Luuliyo ee ahaa in dalku doorasho la isla oggol yahay aadayo taasna ay ka shaqeynayaan, muddo kororsina ay dalka u horseedeyso qalalaase siyaasadeed, waxaana Madaxweynuhu sheegay in uu ayidsan yahay baaqa xukuumadda.
Mar kale markii Golaha Shacabku ay ku dhawaaqeen in ay rideen Xukuumaddii, oo Madaxweyne farmaajo si hal-haleel ah u soo dhaweeyey qoraalkii uu soo saarey waxa uu ku soo afmeeray, in uu ku taagan yahay go’aanadii Dhuusamareeb shirkaasna u diyaar garoobayo doorashaduna xiligeedi ku dhici doonto.
Haddaba taaktikada Madaxweyne Farmaajo ciyaarayo ma tahay mid run ah marka la eego tallaabooyinkii u danbeeyey ee uu qaadey iyada oo la tixraacayo qoraalkiisi hore ee ku taageeray baaqa xukuumadda, iyo dagaalkii lagu qaadey maalmo kadib Raysalwasaare Kheyre.
Haddii todobaadkan uu ku dhawaaqi waayo guddiga farsamo ee lagu heshiiyey, waxaa cad in shirka Dhuusamareeb 3 uu burburey, maadaama wax lala tago oo laga soo shaqeeyey aysan jirin.
MAXAA LA GUDBOON DOWLAD GOBOLEEDYADA?
Dowlad goboleedyada dalku waxay haytsaan fursad kale oo ay ku badbaadin karaan in geeddi socodka 20 sano soo socdey ee Dowaldnimada Soomaaliya aanu god ku dhicin, waxaana hadda taas u dheer beesha caalamka oo soo jeesatey indhahana ku kala qaadey qaabka horornimada ah ee dad qaarkood u doonayaan in ay awooda dalka u maroorsadaan taas oo bilowu noqon karta burbur kale iyo in lagu khasaaro wixii mudada dheer laga soo shaqeynaayey.
Dowlad goboleedyada waxaa la gudboon in ay ku dhawaaqaan shir BADBAADO QARAN, maadaama dhacdooyinkii u danbeeyey ay muujinayaan halka Villa Somalia u socoto.